Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Wafti uu Hoggaaminayo oo lagu wado in ay Maanta Gaaraan Magaalada London | warsugansomaliya.wordpress.com
warsugansomaliya / May 5, 2013
May 5,2013 Muqdisho(warsugansomaliya.wordpress.com) Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud iyo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa lagu wadaa inay maanta gaaraan magaalada London ee dalka Britain halkaasoo uu ka furmi doono shir looga hadlayo Soomaaliya maalinta Salaasadaha ah ee soo socota.
Shirkan ayaa waxaa kasoo qaybgalay dalal fara badan oo kuwa deeqaha bixiya ah, iyadoo ay guddoomin doonaan madaxweyanha Soomaaliya iyo ra’iisul wasaaraha dalka Britain, waana shirkii labaad ee Somalia loogu qabto magaalada London.
Diyaagarow lagu soo dhaweynayo madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa wuxuu ka socdaa magaalada London, iyadoo socdaalkan uu noqonayo kii labaad oo uu madaxweynuhu ku tago dalkaas tan iyo markii xilkan loo doortay muddo sideed bilood laga joogo.
“Shirka London waa ka duwan yahay shirkii hore, waayo shirkii hore waxaa qabtay dowladda Britain, balse midkaan innaga ayaa codsannay innaga ayaana hoggaanka u qabanayna,” ayuu yiri Xasan Sheekh oo xildhibaannada baarlamaanka toddobaadkii hore warbixin ka siinayay.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in ajandayaasha shirkaas ay horgeyn doonaan ay ka mid noqondaan siyaasadaha dowladda ee ay ku doonayso inay wax kaga qabato dalka, qorshaha la dagaalanka kufsiga iyo dib u habeynta hay’adaha maaliyadda dalka.
Waxaa lagu wadaa in shirku socdo hal maalin, waxaana dowladda Britain ay sheegtay inay ku rajo-weyn tahay in qodobbada kasoo baxaya shirkaas ay noqdaan kuwo wax wanaagsan ka tara dib u dhiska iyo soo celinta amniga Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliya oo ah tii ugu horreysay oo rasmi ah muddo 22-sano ah kaddib ayaa waxay dadaal weyn ugu jirtay inay dib u soo celiso xiriirka kala dhexeeya dunida; waxayna sidoo kale dadaal ugu jirtaa inay soo celiso ammaanka guud ee dalka inkastoo Al-shabaab ay weli deegaanno badan ka taliso.
Wariye .Faysal Muse Aadan
May 5, 2013 in Home, warka.
← WAR DEG DEG: Faah faahin Hordhac ah Dhimashada dadka laxaqijiyey (Sawiro iyo vedio)
Safaarada Soomaaliya ee Turkiga oo ka Jawaabtay Hadal saacadihii la soo dhaafay ka soo baxay saxaafada oo looga Been abuurtay safiirka Soomaaliya ee Turkiga, in uu u baxsaday Holand, →